ရန်ကုန်သားတာတေ| April 25, 2012 | Hits:5,371
| | “မပြောဘူး”
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> seindiamond April 25, 2012 - 11:28 pm	ုဟုတ်တယ်ဦး၇ုကစိုးရေ၊
Reply	Hnin Nu April 26, 2012 - 1:36 pm	စိန်ကြည် နော် စိန်ကြည် ဆိုတော့ကာ … အင်း …. Reply	ဗန်းမော်သား April 27, 2012 - 6:36 pm	အဲရစ် ကြီးက လန်ဒန်ပြန် အကျယ်ချုပ်နဲ့ ကျန်…. ဟဲဟဲ